7 Magaalooyinka Ugu Fiican Hawlaha Bannaanka ee Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 7 Magaalooyinka Ugu Fiican Hawlaha Bannaanka ee Yurub
Jardiinooyinka cagaaran, wadooyinka hortayada buuraha, iyo jawiga raaxada leh waxay kufiican yihiin madaddaalo dibedda. Magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub waxay leeyihiin waxkastoo aad isku dayi karto dhamaan howlaha bannaanka ee yurub bixiso. Laga soo bilaabo baaskiil wadista Amsterdam ilaa dul saboolka ah ee Munich, kuwan 7 magaalooyinka ugu fiican ee loogu talagalay waxqabadka banaanka ee Yurub waa meel fasax ku habboon.
gaadiidka Tareenka waa habka ugu bay'adda u fiican in safarka. Maqaalkani waxa la qoray si loo baro oo ku saabsan tareenka Travel oo waxaa looga dhigay by Save A tareenka, Websaydhka Tigidhada Tareenka Ugu Fiican Dunida.
1. Magaalooyinka Ugu Fiican Hawlaha Bannaanka ee Yurub: Amsterdam, Netherlands ayaa
Markii magaalada laga dhiso hareeraha marinnada wabiga, waxaa waajib kugu ah inaad fasax ku qaadatid banaanka. Amsterdam waxaa loo yaqaanaa magaalada ugu baaskiilka-fiican Yurub. Ku kaxaynta baaskiil kaliya maaha wadooyinka gaadiidka laakiin waa hab nololeed loogu talagalay dadka deegaanka.
Baaskiil waddo waa meel banaanka ka ah Yurub oo dhan, safarka iyo booqashada. Ikhtiyaar kale ayaa ah sahaminta magaalada doon saaran, ka hooseeya buundooyinka quruxda badan iyo qaab dhismeedka Dutch. Jidka, waad ka booda kartaa inaad ka cabto makhaayad kale oo laga cunteeyo ama makhaayad qurux badan oo ku taal webiga Amstel.
Hawo cusub, cirka buluugga ah, iyo beddelka muuqaalka waxay u samaysaa jawiga ugu habboon ee firfircoonida iyo qaab ahaanta loo joogi karo intaad fasax ku jirtay.
Switzerland waxay leedahay aragtida muuqaalka ugu badan in Europe, iyo Geneva waxaa ku wareegsan dabeecad cajiib ah. Sayidka, Dadka deegaanka ayaa ah kuwa sida ugu badan wax uga qabta aragtida iyo dhulalka ku xeeran, banaanka oo firfircoon. Tusaale ahaan, Lake Geneva, sidoo kale loo yaqaan Lake Leman wuxuu jecel yahay ciyaaraha biyaha.
Doonta fuushan, kalluumaysiga, kaftan, dabaasha ama orodka, waa howlo yar oo banaanka ah oo laga sameeyo Harada Geneva. Waad kiraysan kartaa doon ama waad qaadi kartaa qiimo jaban koorsada doonta.
Hadaad tahay qof buuro ah, markaa waddooyinka Swiss Alps waa safar gaaban oo ka fog magaalada. Buurta baaskiilka, tug, kaamam, iyo barafka barafka waa hawlo bannaanka ka socda oo lagu raaxeysto Geneva.
Lyon ilaa Geneva oo uu tababaray
Zurich ilaa Geneva waxaa qoray Train
Paris ilaa Geneva waxaa qoray Train
Bern ilaa Geneva waxaa qoray Train
3. Magaalooyinka Ugu Fiican Hawlaha Bannaanka ee Yurub: Munich, Germany
Munich waxay hoy u tahay midka ugu weyn jardiinooyinka magaalooyinka dunida oo dhan, Beerta Ingiriiska. Dhul Fiican iyo Dhul cagaaran ayaa ku habboon waxqabadka bannaanka, sidaas darteed Munich ayaa dusha sare looga saaray 7 magaalooyinka ugufiican howlaha banaanka ee Yurub.
Beerta Ingiriiska, waad firfircoonaan kartaa, adigoo ordaya ama qaboojinaya, a biyaha, qorraxda-qubeyska, iyo dabaasha. Meel kale oo weyn oo loogu talagalay wax qabadyada bannaanka ee Munich waa wabiga Eisbach-kii uu sameeyey, beerta Ingiriiska. Waa goob ugub ah oo loogu talagay in lagu qabto mawjadaha oo lagu dhaqmo dhaq dhaqaaqooda.
Dusseldorf ilaa Munich waxaa qoray Train
Dresden ilaa Munich by Train
Nuremberg ilaa Munich oo uu ku tababaray Train
Bonn in Munich by Train
Joogitaanka magaalada ama u aadida baadiyaha, Vienna waa magaalo naxdin leh oo loogu talagalay waxqabadka bannaanka ee Europe. Ku dul safarka Danube, ama aadid banaanka xarunta mashquulka badan ee Lainzer Tiergarten keyd dabiici ah, Vienna waxay leedahay hawlo bannaano oo badan oo bannaanka loogu bixiyo nooc kasta oo safar ah.
Haddii aad go'aansato inaad sii joogto xarunta, mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee loo socdo socdaalku waa safar Segway ama doon ku socda webiga Danube. laakiin, haddii aad doorbideyso sahaminta Vienna sida deegaanka, iyo helitaanka dhagaxyada qarsoon, markaa kaydka dabiiciga ahi waa kaamil.
25 km kiiloomitir ah oo duurka iyo xayawaanka duurjoogta ah ayaa kugu sugaya jardiinada ugu weyn magaalada Vienna. Soco, orod, ama ubax ha ku lahaadee geedkan cagaaran, ka dhigi doonaa Viennese fasaxii oo dhameystiran.
5. Magaalooyinka Ugu Fiican Hawlaha Bannaanka ee Yurub: Zurich, Switzerland
Markay buuraha iyo hareeraha buuraha Alpine ku xeeran yihiin, iyo haro yaab leh oo hortiis ah, waxaad ku qasban tahay inaad ka mid noqoto magaalooyinka ugu wanaagsan waxqabadka bannaanka ee Yurub. Zurich waa magaalo xiiso iyo xamaasad leh, halka aad ku safri karto raac tareenka SZU ilaa munaaradda indha indheynta. Munaaradda indha indheynta ayaa ku taal Uetilberg, buurta qurxoon ee magaalada oo leh aragtiyo yaab leh oo ku xeeran.
Haddii aad jeclaan tug, ka dib waxaad ku fuuli kartaa bartamaha adigoo raacaya dariiqooyinka safarka ee kala duwan ee Uetilberg. Dhaqdhaqaaq kale oo bannaanka ka jira oo ku yaal Zurich waa madadaalo dhanka midig ee wabiga, Ciyaar kubbadda xeebta laliska ama uun isdeji, ee Flussbad Oberer Letten, meesha hangoolka booska ee dadka deegaanka.
Haddii aad doorbideyso inaad u sameyso sida dalxiis oo ku yaal Zurich, ka dib ku bood bood doon doon doon ah oo ku xeeran Limmatschifffahrt oo kaa hoos geyn doonta magaalada dhexdeeda 7 buundooyinka.
Laydiiyay Zurich tareen
Lucerne ilaa Zurich tareen
Lugano ilaa Zurich tareen
Geneva ilaa Zurich tareen
6. Fiican, France
Orod ama ku raaxeysiga subixii badda dhexdeeda, waa mid ka mid ah nashaadaadka aadka u wanaagsan. Xitaa markaad fasax ku jirto, firfircoonaan iyo qaab isu dheelitirnaan leh dhadhaminaya cunnada deegaanka iyo koolkoolinta naftaada. Waxaas oo dhan oo dhan, xaalad firfircoon oo maskaxdu dareento waa cajiib markay Faransiisku Riviera kugu dhiirrigeliyaan oo ay ku dhejiso tamar iyo fiitamiin c.
Nice waa magaalo la yaab leh howlaha dibada ee Yurub. Fardo fuushan xeebta, dabaasha, raadinaya badaha, iyo yeelashada qorrax qorrax dhaca ayaa ah nashaadyo dibadeed oo waaweyn oo lagu raaxeysto sida ugu wanaagsan ee Faransiiska Riviera.
Cannes ilaa Paris by Train
Cannes illaa Lyon oo Tareenka loo yaqaan
7. Magaalooyinka Ugu Fiican Hawlaha Bannaanka ee Yurub: Florence, Italy
Florence waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Talyaaniga. Waxaad ogaan kartaa magaalada sida dhammaan dalxiisayaasha, ama gebi ahaanba khaas ah oo aan la ilaawi karin. Ku lugaynta ama baaskiil ku qaadida astaamaha muuqaalka iyo aragtida waa labo hawlo bannaanka ka baxsan oo ku yaal Florence.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto inaad tijaabiso laba nashaad oo banaanka ah, iyo dhowr ka mid ah waxqabadka bannaanka ee ugu fiican Yurub, ka dib isku day duulimaad buufin hawo kulul iyo samaynta hawada. Qaab dhismeedka Florence iyo xadiiqadaha waa kuwo cajiib leh aragtida kor ku xusanna waxay ka qaadan doontaa neeftaada.
Hadaad rabto inaad garaacdo dadkii dalxiisayaasha ahaa oo aad isku dayaysay howlo banaanka ah, markaa Florence waa magaalo la yaab leh oo ku saabsan waxqabadka bannaanka ee Yurub.
Genoa ilaa Florence tareen
Parma ilaa Florence tareen
Milan ilaa Florence tareen
Venice ilaa Florence tareen
Hawlaha Dibedda ee Yurub
Yurub waxaa ka buuxa waxyaabo la yaab leh. Iyada oo aan loo eegeyn inta jeer ee aad u safrtay Yurub, had iyo jeer waxaa jira nolol cusub. Naga 7 Magaalooyinka ugu wanaagsan ee nashaadaadyada dibedda ee Yurub waxay ku habboon yihiin dhiirrigelinta iyo safar-raadinta xiisaha leh. Intaa waxaa dheer, kuwiina si fudud u raba inay sahamiyaan bannaanka iyo muuqaalka qurxoon.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku farxi doonaa inaan kaa caawinno inaad hesho tikidhada tareenka ee ugu raqiisan mid ka mid ah howlahan bannaanka.
Ma rabtaa inaad ku dhajiso bartayada "7 Magaalooyinka ugu Wanaagsan ee Waxqabadka Dibadda ee Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/cities-outdoor-activities-europe/ የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa jidadkeena tareenka ugu caansan - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / ZH-CN in fr / ama / luqadaha de iyo ka badan.
hawlaha frenchriviera outdoor OutdoorActivities Tranride tareen safarka traintravelgermany travelitaly travelswitzerland TravelVienna
Inta badan Bike Friendly Cities In Europe Oo Sida loo Waxaa Hel
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka Danmark, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareenka Safarka Switzerland, Tareen Travel The Netherlands, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe